सुजिता भ’ण्डारी प्रकरण: दाजु बहिनीको प्रेम स’म्बन्धले नि’म्त्याएको घ’टना’ – Sudur Samaj
सुजिता भ’ण्डारी प्रकरण: दाजु बहिनीको प्रेम स’म्बन्धले नि’म्त्याएको घ’टना’
चितवन – पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका ३ कि सुजिता भण्डारीको घटनामा आ’त्मह’त्या दु’रुत्साहनको मु’द्धा दर्ता भएको छ । सुजिताकी आमा अम्बिका भण्डारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा ६ गते बुधवार आत्महत्या दुरुत्साहनमा जाहेरी दिएकी हुन् ।
सुजितालाई आ’त्मह’त्या गर्न वाध्य बनाइएको भन्दै जेठाजु (सुजिताको ठुलोबुवा) का छोरा सचिन भन्ने सुकदेव भण्डारी विरुद्ध जाहेरी दिएकी हुन् । पीडितको जाहेकी पछि प्रहरीले सुकदेवलाई काठमाडौंबाट प’क्राउ गरेको छ ।
साउन ७ गते बिहीबार पक्राउ परेका सुकदेवमाथि जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । सुजिता र सुकदेव नाताले दाजु बहिनी भए पनि लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तो थियो सुजिता र सुकदेवको सम्बन्ध
सुजिता भण्डारी र झापाको झापा गाउँपालिका ६ शरणामतिका सचिन भन्ने सुकदेव भण्डारी नाताले दाजु बहिनी । सुजिता सुकदेवको कान्छो काकाकी छोरी । नाताले दाजु बहिनी भए पनि यि दुईको सम्बन्ध यतीमा मात्रै सीमित थिएन । बिगत केही समयदेखि सुजिता र सुकदेव प्रेम सम्बन्धमा थिए ।
यि दुईको सम्बन्धमा बारे परिवार पनि जानकार थियो । धेरै पटक परिवारले सचेत समेत गराएका थिए । सुकुदेव र सुजिता काठमाडौं गई एक साथ बस्ने योजनामा थिए । चितवनबाट दिदीको घर काठमाडौं जान्छु भनेकी सुजिता केही समय दिदीको बसेर सुकदेवलाई तुरुन्त कोठा खोज्न दबाब दिएकी थिईन् । सुकदेवले कोठा खोजेर उनीहरु सँगै बसेको समेत अनुसन्धानले देखाउछ ।
लामो समय एकअर्कासँग बसेपछि सुजिताले सुकदेवलाई विवाह गर्न दबाब दिएको पनि अनुसन्धानमा खुलेको छ । विवाह गर्न सामाजिक तथा नैतीक कठिनाई हुने भएपछि सम्भव भएसम्म बिदेश जाने उनीहरुको योजना थियो । तर सम्भव नभए एक आपसमा अपहरणमा परेको बहाना बनाई कसैले थाहा नपाउने ठाउँमा गएर बस्ने योजना बनाएका थिए ।
असार ९ गते सुजिताले सुकदेवलाई विवाह गर्न प्रस्ताव गरे पछि सोही बिषयमा दुईबीच विवाद भएको देखिन्छ । विवाह नगरे सुजिताले मर्ने धम्की दिएको र सुकेवले जे सुकौ गर भनेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाउछ । त्यसपछि यि दुईबीच सम्पर्क नभएको घटनाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डिएसपी ईन्द्रबहादुर रानाले बताए ।
के हो घटना ?
११ गते बिहान ६ बजे सुजिता साथिको घरमा तरकारी लिन भनी घरबाट निस्किएकी थिईन् ।सुजिताकी दिदी कबिताले प्रहरीलाई दिएको जानकारी अनुसार दिदी (कबिता) बहिनी (सुजिता) र भाई सँगै सुतेका थिए । सुजिता बिहान उठेर कसैलाई थाहा नदिई घरबाट निस्किएकी थिईन् । घरबाट बिहानै निस्किएकी सुजिताले केही बेरपछि दिदीलाई फोन गरेकी थिईन् ।
कबिताको मोबाइल चार्जमा राखेकोले फोन उठ्दैन । कबिताको मोबाइलमा ६,७ पटकसम्म पुरै घण्टी बजेको थियो । केही बेरमा बहिनीको मिस्डकल देखेपछि कबिताले सुजितालाई फोन गर्छिन् । कबिताले फोन गरेपछि सुजिताले आफु अपहरणमा परेको र आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधिएको, स्प्रे छर्किएको भनेर जानकारी गराउछिन् ।
बहिनीले अपरणमा परेको भनेपछि सोही दिन कविताले ईलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीमा टेलीफोन मार्फत घटनाको बारेमा जानकारी दिईन् । सोही दिन कविताले लिखित जाहेरी समेत दिईन् । जाहेरीपछि इप्रका टाँडीका डिएसपी ईन्द्रबहादुर रानाको नेतृत्वमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो ।
खोजतलासका क्रममा असार ११ गते हराएकी सुजिताको शव २० गते आइतबार दिउँसो ब्रम्स्थानी सामुदायीक वनमा भेटिएको थियो । प्रहरीले शवसँगै पतेरा मार्न प्रयोग हुने बिषादीको बोतल र झोला फेला र उनले प्रयोग गर्ने गरेको मोबाइल फेला पारेको थियो। २१ गते प्रहरीले शव पोष्टमाटमका लागि काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल पठाएको थियो ।
पोष्टमाटममा सुजिताको शरीरमा कुनै पनि किसिमको चोटपटक नदेखिएपछि प्रहरीको अनुसन्धान आत्महत्यातर्फ मोडियो । पोष्टमाटममा केही नदेखिएपछि प्रहरीले २३ भिसेरा परीक्षणका लागिखुमलटार पठाएको थियो । भिसेराको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा सुजिताको सुकदेवसँग बिशेष सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । सुजिताको साउन ४ गते देवघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो ।-एटुजेड समाचारबाट
ग्यास सिलिन्डर जोड्ने क्रममा पड्किएपछि मच्चियो भागदौड, २ जनाको मृत्यु
अनिता मृ’त भेटिनु अगाडी गरेकी रहिछन यस्तो म्यासेज
By sudur samaj
ताप्लेजुङमा पहिले कहीँ नजितेको माओवादीलाई गठबन्धनका कारण दुइटा पालिका ‘उपहार’
May 17, 2022 sudur samaj
गगन थापाको वडामा पनि सिर्जनाभन्दा बालेन अगाडि
May 17, 2022 sagar post
पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ: यी हुन् २ लाखभन्दा कम मुल्यका ५ इलेक्ट्रीक स्कुटर
स्वतन्त्र उम्मेदवार गायक टंक तिमिल्सैनाले २०० मत गणना गर्दा ३ मत पाए !
धनगढीमा कांग्रेसका नृप वडलाई हराउदै, स्वतन्त्र उम्मेदवार हमाल अत्यादिक मतका साथ विजयी !
फेरी पनि चितवनमा माओवादी जित्ने प’क्का, रेनु दाहाल लीईन यति धेरै मतले अग्रता”
माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका मन्त्री झपट बोहराको वडामा एमाले पराजित !